Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » Uyigcina njani iLali enoKhenketho lweTea
Amathafa eti ayefana namanyathelo amakhulu akhazimlayo, abengezela phantsi kwelanga elinzima lasekwindla, njengoko izityalo zeti eziluhlaza ezizihombisileyo zihluma amahlumelo ethenda kwidolophu yaseLiubao ngasekupheleni kuka-Okthobha.
Kwaba kanye emva kokwehla kweFrost, i-18 ye-24 imimiselo yelanga yelanga, yawela ngo-Oct 23. Abantu basekuhlaleni babexakekile bevuna amagqabi. Eli yayilixesha elilungileyo lesithethe. Ivumba elimnandi lamagqabi lithathwa njengelona libukhali ngenxa yomahluko wobushushu phakathi kwemini nobusuku ngeli xesha lonyaka kunye namanzi amancinci emvula.
Yayingengobalimi nje ababevaleleka phakathi kwemithi, kodwa iindwendwe ezazihlola umtsalane wasemaphandleni wedolophu ehlala kwidolophu yaseCangwu, eWuzhou, kwingingqi ezimeleyo yaseGuangxi Zhuang.
Abakhenkethi badla ngokuzisa umoya wokusebenza kwidolophu eqhele ukuzola ngo-Okthobha, ngokutsho korhulumente wendawo. Uninzi lwabo lwenza into eyenziwa ngabahlali: baphatha ibhaskithi yoqalo emagxeni baze bachole amagqabi eti. Ngokwemvelo, bafota imifanekiso ngasemva kwamathafa azayo kunye nesibhakabhaka esicwebileyo.
Ekupheleni kosuku, abahambi banokuzihlaziya ngeti, bafunde ukuqhotsa kunye nokuqengqa amagqabi ngendlela yakudala, ngelixa ivumba liphuma kwiimbiza ezitshisayo kwaye lingena emoyeni.
U-Kosima Weber Liu, waseJamani, utyelele idolophu ngo-Okthobha kwaye wachukunyiswa yiti elapho, ngakumbi iziphumo zayo zonyango.
“Ndandikhe ndeva ngeenkqubo zokwenza iti ngaphambili, kodwa ndiye ndafumana amava okuba kunjani ukuqhotsa iti ngokwam,” utshilo uLiu.
Uyiqonda ngcono inkqubo kunye nesiko eliyingqongileyo.
“Ndaziva ndikwindawo ekhethekileyo, engaqondakaliyo eTshayina.”
Idolophu yaseLiubao yaziwa ngeti yayo emnyama ethe, iminyaka eyi-1,500, ibiyinto emnandi. Ineemeko ezifanelekileyo zokuvelisa iti, kunye nokulingana kokufuma, ukukhanya kwelanga, umhlaba kunye nomphakamo, malunga neemitha ezingama-600 ngaphezu komphakamo wolwandle, loo nto iphantse ilunge kakhulu ukuba yinyaniso.
Iti yeLiubao ithathwa njengeyona nto ibalaseleyo kweli lizwe kwaye yanikwa imbeko kuMlawuli uJiaqing ngexesha leQing Dynasty (1644-1911).
Yayikwasetyenziswa njengeyeza lezityalo ukulwa neemeko ezishushu nezifumileyo xa abantu baseTshayina bafudukela kuMzantsi-mpuma Asia ngasekupheleni kwenkulungwane ye-19.
Iti yeLiubao inokuveliswa ukusuka entwasahlobo ukuya ekwindla. Nangona amaqabunga avela ekuqaleni kwentwasahlobo abhekwa njengeyona nto ithenda kwaye ngoko umgangatho ophezulu, athwala i-flavour ekhethekileyo xa evunwa ngasekupheleni kwekwindla.
Amagunya asekuhlaleni aphuhlisa iti edibeneyo kunye nokhenketho kule minyaka idlulileyo.
Ngabakhenkethi abaninzi, 'i-agritainment' edibanisa indawo yokuhlala, ukulima kunye namava okukha iti sele iqalile," utshilo uCao Zhang, unobhala weqela ledolophu yaseLiubao.
Kwilali yaseDazhong, kumzantsi-mpuma weLiubao, uLiang Shuiyue, ngokoqobo, wangcamla izibonelelo zokhenketho lwasemaphandleni.
Unendawo yokuhlala ezisa ingeniso ezinzileyo kusapho lwakhe.
Ingeniso edibeneyo eDazhong ifikelele kwi-88,300 yuan (i-13,810 yeedola) kulo nyaka uphelileyo, emva kokuba abantu basekuhlaleni bekhuthazwa ukuba baphuhlise izitiya zeti phantsi kwenkqubo edibanisa amashishini, ukongamela ngokubambisana kunye nemizi yasemaphandleni.
I-Dazhong ifumene abatyeleli abakwi-150,000 ngexesha lomnyhadala weNtwasahlobo walo nyaka kwaye le lali iyinxalenye yebhanti lokuvuselelwa kwamaphandle elithe igunya laseLiubao lizama ukulakha.
Injongo kukuphuhlisa "isitrato seti" esahlukileyo, iindawo zokuhlala ezisemaphandleni kunye neepaki zeti eziluhlaza ukuze zibonwe, kunye nokudala indawo ekhethekileyo, kunye needolophana ezibonisa iimpawu ezahlukeneyo, uCao uthi.
Imyuziyam yeti yaseLiubao inika abakhenkethi incasa ebanzi yoko kubandakanyekayo ekuziseni isiselo esihlaziyayo kwindebe yomntu.
U-Khani Fariba kunye no-Ishtiaq Ahmed, isibini esivela e-Iran, bamangaliswa kukuthandana okuhambelana neti ngexesha lokutyelela kwabo kwimyuziyam.
Kwinxalenye yokuqala yenkulungwane yama-20, abahlali babeza kupha iti yeLiubao kunye netyuwa kumtshakazi ukubonisa uthando oluhlala ixesha elide, njengoko iti isuka entabeni kwaye ityuwa iphuma elwandle.
Kwilali ekufutshane yaseTangping, indlalifa yelifa lenkcubeko engabonakaliyo, u-Wei Jiequn, oneminyaka engama-63, kunye nentombi yakhe uShi Rufei, oneminyaka engama-34, babambelele kubuchule bemveli, kubandakanya ukomisa, ukubhaka kunye nokubilisa amagqabi.
Baqhuba iworkshop kwilali apho abakhenkethi banokufunda malunga nenkcubeko yeti yaseLiubao ngokufumana inkqubo yemveli yokuvelisa.
UShi ebeyinkokeli ekuncedeni abantu basekuhlaleni bakhulise umvuzo wabo ngokwenza iti. U-Shi uye wagxininisa ekuveliseni iindlela ezintsha zokwenza iti kwaye abelane ngamava akhe namakhaya asekuhlaleni asemaphandleni.
Ukususela ngo-2017 ukuya ku-2020, indawo ye-Liubao tea plantation kwi-Cangwu County inyuke ukusuka kwi-71,000 mu (4,733 hectares) ukuya kwi-92,500 mu, ngokutsho kurhulumente wendawo. Imveliso yeti yonyaka isuke kwiitoni ezingama-2,600 ukuya kwiitoni ezingama-4,180 ngelo xesha leminyaka emithathu, ngexabiso lemveliso eliphindwe kabini ukusuka kwi-310 yezigidi ukuya kwi-670 yezigidi zeeyuan.
Ngo-2025, ixabiso lemveliso yeti yeLiubao evela eWuzhou iya kufikelela ngaphezu kwe-50 yebhiliyoni ye-yuan, utsho uZhong Changzi, usodolophu waseWuzhou.
“Ngokwesi siseko, siya kuqhubeka siqhubela phambili ekudaleni ishishini le-yuan leebhiliyoni ezili-100,” utshilo uZhong.